ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း လယ်သမားတွေ စပါးရိတ်သိမ်းဖို့ အခက်တွေ့
ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း လယ်သမားတွေ စပါးရိတ်သိမ်းဖိ...
31 ต.ค. 2562 - 18:15 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြားထဲကနေ အခက်အခဲများစွာနဲ့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ စပါးစိုက်ခင်းတွေဟာ အခုအခါ မှည့်စပြုနေကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ရိတ်သိမ်းဖို့ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
တစ်ချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင် ကျွဲနွားတွေ မထိန်းကျောင်းနိုင်တာကြောင့် ဝင်ရောက် စားသောက်ရာကနေ စပါးခင်းတွေ ပျက်စီးကုန်တယ်လို့လည်း လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့နယ် လက္ကာရွာက လယ်သမားတစ်ဦးက တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေရင် လယ်ဧက ထောင်နဲ့ချီပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူက " လယ်သမားတွေက တိုက်ပွဲမရှိမှ ကိုယ့်စပါးကိုယ် ရိတ်ချိန်ရမယ်လေ ။ အဓိကကအခက်အခဲဖြစ်တဲ့နေရာက မြောက်ဦး-စစ်တွေကားလမ်း အရှေ့ဘက် က ပေါက်တော၊ ဝေသာလီ တို့ အကုန်လုံးက အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဧကက သုံးထောင်ကျော်၊ လေးထောင်လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် " လို့ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက အခြေခံတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်သလို စပါးကျီတွေလို့ တင်စားရတဲ့ မြောက်ဦး၊ မင်းပြားနဲ့ ကျောက်တော်တို့ အပါအဝင် မြို့နယ် ခုနစ်ခုလောက်မှာ ဒီလို အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကောက်စောစပါး၊ ကောက်လတ်စပါး၊ ကောက်ကြီးစပါး ဆိုပြီး စိုက်ပျိုးရာမှာ ကောက်စောစပါးက ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်နေပေမယ့် မရိတ်သိမ်းနိုင်တာကြောင့် စပါးသီးတွေ ကြွေကျ ပျက်စီးမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ လယ်သမားတွေက ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့အကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ကျေးရွာတွေနဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လယ်သမားတွေဟာ တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့် ပေးဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပြီး မင်းပြားမြို့နယ်မှာ ရဟတ်ယာဉ်သုံးစီးနဲ့ တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို ရသေ့တောင်မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း လယ်သမားတွေ စပါးရိတ်သိမ်းဖို့ အခက်တွေ့